अलेक्ज्याण्डर द ग्रेट अर्थात सिकन्दर महान | News Polar
अलेक्ज्याण्डर द ग्रेट (ई.पू. ३५६–३२३) लाई भारतीयहरू ‘सिकन्दर महान’ भन्नेगर्छन् । मेसेडोनियन भाषामा अलेक्ज्यान्डर र फारसी भाषामा उनलाई ‘एस्कन्दर–ए–मग्दुनी’ भनिएको अपभ्रंश भारतीयहरूको सिकन्दर हुनपुग्यो । यिनी प्राचीन मेसेडोनियाका राजाका साथै अजेय योद्धा तथा इतिहासमै चर्चित सैनिक कमाण्डर थिए, जसले दिग्विजय गर्दै ग्रीस, पर्सिया, इजिप्ट र अन्य प्रदेशहरू मिलाएर विशाल साम्राज्य खडा गरे । उनको दिग्विजयलाई रोक्नसक्ने भारतीय राजामा पुरु नै थिए । पुरु भनेका, पुत्रको आयु र वैंश मागेर शारीरिक बिलासिता र मोजमज्जामा डुबेका भनी वर्णित पौराणिक राजा ययातिका छोरा हुन् । पुरुको युग भनेको महाभारतकालीन हो ।
अलेक्ज्यान्डर लड्दै र साम्राज्य विस्तार गर्दै आधुनिक भारतको पञ्जावसम्म आईपुगेका थिए, जसलाई मगधको विशाल सेनाले लखेटेर फिर्ता पठायो । ३२ वर्षको उमेरमा उनको मृत्यु बेबिलोनमा भयो । मृत्युको कारणमा रक्सीबाट कलेजोको बिमारी, ज्वरो वा विषाक्त खाना मानिएको छ । तर मेरिल्याण्ड युनिभर्सिटीको स्कूल अफ मेडिसिनको १९९८ को एउटा वैज्ञानिक रिपोर्टअनुसार उनको मृत्यु टाईफाइडले गर्दा भएको दावी गरिएको छ । प्राचीन बेबिलोनमा मलेरिया पनि व्यापक मात्रामा रहेकोले उनको मृत्यु औलो (मलेरिया) बाटै भएको पनि भनिन्छ । जेहोस उनको निधन संक्रामक महामारीबाटै भएको बुझिन्छ ।
‘सिकन्दर महान’ को यो भनाई रोबिन लेन फक्सको १९७३ मा प्रकाशित पुस्तक अलेक्ज्याण्डर द ग्रेटबाट लिइएको हो, "Sex and sleep alone make me conscious that I am mortal" । उनको मूर्तीको यो चित्र ई.पू. तेस्रो शताब्दीको, खास मूर्तीको रोमन कपी एवं सबभन्दा मिल्दो अनुहारको मानिन्छ ।
सिकन्दरले जितेकाे भूगाेल
प्रकाशित : भदौ २८, २०७६, १२:२०:१५